Ọ bụ ahịa Mgbakwunye Amazon kwesịrị ya? - Mụta ịde blọgụ ọkachamara
N'etiti ọtụtụ narị mmemme mmemme, mmemme Mgbakwunye nke Amazon bụ otu n'ime usoro ama ama na nke a na -ejikarị maka ịkpata ego na weebụsaịtị ma ọ bụ blọọgụ.
Ọ bara uru isonye na mmemme mgbakwunye Amazon. Mgbakwunye ahịa site na amazon ka bụ ụzọ kachasị mma iji nweta ego n'ịntanetị. Ọ nwere ọnụego ntụgharị dị elu karịa mmemme ndị ikwu ndị ọzọ. Ị nwere ike nweta ego 10 pasent nke ọrụ. Mmemme Mgbakwunye Amazon na -enye akụrụngwa iji nweta ọrụ sitere na mba dị iche iche “otu njikọ” atụmatụ. Ị nwere ike irite ego ngwa ngwa ebe ọ bụla $100 ka 5000 + dollar kwa ọnwa nwere oke okporo ụzọ dị oke oke.
Na mbụ Amazon “otu njikọ” atụmatụ adịghị. Njirimara a agbakwunyere na Amazon n'onwe ya n'afọ 2021. Ọ bụrụ na otu okwu gbasara ọdịnihu amazon ọ bara uru n'ezie. Ihe kpatara ya bụ na ọ bụghị ụlọ ọrụ ọhụrụ na -apụta mana ọ gbasawanyela mbara ya 7 + mba.
Ọ na -enye gị ohere ị nweta ego na -enweghị mmachi na ndị ọbịa obodo. Ọ bụ mgbe naanị gị nọ debanye aha maka Amazon United States. Ị nwetara ọrụ nke ngwaahịa zoro aka gị ma ọ bụrụ na mmadụ zụtara na amazon.com naanị. Ụdị ikpe ahụ mere na Amazon. in na amazon.co.uk na ndị ọzọ.
Mgbakwunye ahịa Amazon bara uru
Uru Nweta Akụkọ
Ọdịnaya bụ Eze ma kacha mkpa
Oge agbanweela kpamkpam, ị nwere ike irite uru site na geni.us. Geni.us na -enye gị ohere ilekọta ala na -ahapụ nke amazon “otu njikọ” atụmatụ. Ụgwọ ọrụ ya dị ala nke ukwuu. Mgbe ị debanyere aha na weebụsaịtị ha. Ha nwere atụmatụ ọnụahịa dị iche iche. Site na isi gaa n'ihu. Ị nwere nhọrọ ịhọrọ dabere na okporo ụzọ weebụsaịtị gị.
Mgbe m malitere webụsaịtị Mgbakwunye nke mbụ m, Egosiri m ya naanị site na mmemme mmekọ amazon. N'oge ahụ amataghị m na m nwere ike lekwasị anya n'ọtụtụ mpaghara. Mgbe m nwetara ihe ọmụma nke imeziwanye ego Amazon, Edebara m aha m ngwa ngwa na geni.us. Ọ kachasị, na -ekwu maka ọnụahịa ha ha na -enye na -eji ọrụ ahụ na ọnụ ala dị ọnụ ala.
Ịga n'ihu, M na -eji ụfọdụ atụmatụ dị iche iche karịa ndị ọzọ. Tupu ịdebanye aha maka mmemme amazon m mere blọgụ. Na Bochum ọrụ ngwa ngwa. Edere m ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 20 + isiokwu. N'oge ahụ, akwụsịrị m ike na -ebipụta akụkọ ọhụrụ oge niile.
Mgbe m malitere inwe 5 ka 10 ndị ọbịa kwa ụbọchị, Edebanyere m aha ozugbo na mmemme mmekọ Amazon. Ihe ịga nke ọma nwetara $20 n'ime otu izu. Anọ m na mbido mbụ. Mgbe 6 Ọnwa, Ọ fọrọ obere ka m ruo 500 dollar kwa ọnwa. Ọ pụtaghị na emechiela webụsaịtị m taa. Ọ ka na -arụ ọrụ ma ego na -eto dị ka osisi hockey yana okporo ụzọ.
Ihe kpatara ị nweta ahịa bụ– Ana m ede ọdịnaya agwakọtara. Ole na ole n'ime ha bụ nke azụmahịa, ebe ụfọdụ akụkọ ozi na ndị ọzọ na-edozi nsogbu.
Ọtụtụ n'ime blọgụ m nwere isiokwu na-edozi nsogbu ma na-enweta okporo ụzọ karịa mkpọsa mgbasa ozi ndị ọzọ yana akụkọ na-enye nkọwa. Ihe kpatara Ị maara ihe kpatara ya? bụ na m na -enyere ha aka.
Ha na -etinyekwu oge na webụsaịtị m. Enwekwu njikọ aka anyị na -ahụ. Edemede blọgụ na -enye aka.
N'oge enyemaka ahụ, Ana m akwado ngwaahịa amazon yana ahụmịhe nke m. Ọmụmaatụ, ọ bụrụ na mmadụ na-agụ akụkọ na webụsaịtị m-ka esi ehicha taịl ịsa ahụ n'ụlọ? Na post a kapịrị ọnụ, Edere m ahụmihe m niile, na n'oge blọgụ m na -atụ aro otu ihe ma ọ bụ abụọ m zụtara n'aka Amazon. Etinyere m njikọ njikọta ebe ahụ na maka ịzụrụ ihe ọ bụla, Ana m anata ọrụ.
Mmechi: Na mkpokọta, ọ bara ezigbo uru isoro ndị otu Amazon na -arụkọ ọrụ ka ọ na -agbasawanye echiche ha na mba ọhụrụ. Iji nwee ihe ịga nke ọma na njem mmemme nke Amazon, ị kwesịrị ịdepụta ọdịnaya na-edozi nsogbu mgbe niile yana akụkọ azụmahịa yana ozi.
Mgbasa Ozi Mgbakwunye ọ siri ike n'ezie?
Nke gara agaCan nwere ike ịmekọrịta mgbakwunye yana AdSense?
Ọzọ PostOtu esi enweta ahịa $ 1000/m na ahịa mmekọ: 6 Nzọụkwụ Dị Mfe